विज्ञ र स्तंभकार – Khel Dainik
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ?
खेलकुदका प्रमुख आकर्षक पेशाहरु
भुटानसँग किन हार्यो नेपाल ?
यस्ता छन् रसिया विश्वकप खेल्ने समूह सी का टोलीहरु
नेपालले यहि माघ १५ र १८ गते मौरिसिअस विरुद्ध आफ्नै घरेलु मैदानमा दुइ मैत्रीपुर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले मौरिसिअस विरुद्ध खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो।
पूर्वी नेपालको सुन्दर शहरहरु मध्ये इटहरी पनि एक हो ।
मेरो पछिल्लो लेखमा खेलमैदान निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको। थियो ।
घरमै जारी साफ यु–१८ च्याम्पियनसिपमा लगातार दुई पटकको विजेता तथा साविक विजेता नेपाल समूह चरणमा भुटानसँग हारेपछि त्यसले नेपाली फुटबलमा ठूलै तरंगा पैदा गर्यो ।
एजेन्सी । आगामी बर्ष रुसमा हुने फिफा विश्वकपको समूह सी मा पूर्वविश्वविजेता फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, पेरु र डेनमार्क आमने सामने हुँदैछन् । यो समूहबाट फ्रान्सलाई अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्ने बलियो दावेदार मानिएको छ । डेनमार्क र पेरुबीचको भिडन्त पनि रोमाञ्चक हुने धेरैको अनुमान छ भने एसियन पावर हाउस अष्ट्रेलियाले यस समूहमा ठूलै चुनौति पेश गर्न सक्ने […]
रसिया विश्वकपमा यस्ता छन् समूह बी का टोलीहरु
पोर्चुगल र स्पेन जस्ता दिग्गज टोली एउटै समूहमा परेपछि यो समूह बी लाई निकै रोमाञ्चक समूहका रुपमा हेरिएको छ ।
पुष ४, २०७४
एजेन्सी । आगामी बर्ष रुसमा शुरु हुन गईरहेको फिफा विश्वकपका लागि विश्वभरिका फुटबल प्रेमीहरु यस प्रतियोतिगतालाई व्यग्रताका साथ पर्खिरहेका छन् । रुसको फुटबल स्टेडियमहरु अहिले लगभग विश्व फुटबलको यो ठूलो कूम्भमेलालाई भव्यताका साथ आयोजना गर्न पर्खीरहेको छ । यसैबीच यहि डिसेम्बर १ तारीखका दिन रुसको राजधानी मस्कोमा विश्वकपका समूह चरणको ड्र सार्वजनिक गरियो । कुल […]
खेलकुदको जन्म कहिले र कहाँ भएको हो भन्ने अाज सम्म यकिनका साथ भन्न सकिएको छैन ।
करियर बनाउन अष्ट्रेलिया पुगे आशिष र सुमन असार २२, २०७४
फुटबल गतिविधीबाट टाढा रहन थापालाई फिफाको आदेश असार २२, २०७४
नुवाकोटमा उपमेयर कप शुरु असार २२, २०७४
दोस्रो खेलमा पनि युगाण्डासँग हार्यो नेपाल असार २२, २०७४
विश्वकर्मा कप फुटसल शनिबार असार २२, २०७४
अमेरिकामा लक्ष्मणलाई पदक असार २२, २०७४